कुलमान तिमी महान् छौँ ! -कुलमान तिमी महान् छौँ ! -
कुलमान तिमी महान् छौँ !
१० भाद्र २०७७, बुधबार २०:३८ मा प्रकाशित
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल केही सातामा सकिँदैछ । कुलमानको कार्यकाल सकिन लाग्दा कुलमानलाई फेरि नियुक्ति गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा सर्वत्र मत आइरहेकै छ ।
यही क्रममा मंगलबार कुलमानले फेरि निरन्तरतापाएको भन्दै शुभेच्छुकजनले बधाई दिए । तर, मन्त्रिपरिषदबाट यसबारे कुनै निर्णय भएको थिएन । जेहोस्, कुलमानको कार्यकाल सकिन लागेको विषयले यतिबेला कैयन् नेपाली चिन्तित छन् र उनीहरु भनिरहेका छन्, ‘सरकार कुलमानलाई फेरि नियुक्ति देऊ ।’
कुलमानको पक्षमा नेपालीहरुले स्वेच्छिक रुपमा आवाज उठाइरहेका छन् । आउनुस्, सुरुमा कुलमानलाई चिनौँ ।
वि.स. २०२७ सालमा रामेछापको दुर्गम गाउँ बेथानमा जन्मेका हुन् कुलमान घिसिङ । उनले गाउँकै विद्यालयबाट प्राथमिक शिक्षा पूरा गरे । त्यसपछि माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि उनी आफ्ना दाईहरूसँग काठमाडौँ आए । काठमाडौंमा उनले बालसेवा माध्यमिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरे र पछि अमरआस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न थाले । नेपालबाट आइएस्सी गरेपछि उनले छात्रवृत्तिमा भारतको जमशेदपुर बाट सन् १९९४ मा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरे । त्यसपश्चात कुलमानले नेपाल आएर पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इञ्जिनियरिङमा मास्टर गर्दा इन्ट्रेग्रेटेड रिसर्च प्लानिङ विथ डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टमा थेसिस गरे ।
त्यसपछि भने उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरे तर यसअघि नै इन्जिनेइरिङ्ग सक्ने वित्तिकै २०५१ मा उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सातौं तहको इन्जिनियरको सेवामा आफूलाई समर्पित गरिसकेका थिए । प्राधिकरणमा काम गर्दा–गर्दै कुलमानले रसुवाको चिलिमे जलविद्युत परियोजनाको ठुलो जिम्मेवारी पाए । चिलिमे हाइड्रोपावरको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा चिलिमेकै आम्दानीबाट उनले तीनवटा अन्य आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गरेका थिए तर बिडम्बना पछि उनलाई उक्त परियोजनाबाट हटाइयो र उनी प्राधिकरणको केन्द्रमा आए यद्दपी उनी दुई वर्षसम्म जिम्मेवारीविहिन हुन पुगे ।
वि.स. २०७३ सालमा उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भए ।
हो, कुलमान विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति भएको बेला देशले १६ घण्टा भन्दा बढीको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको थियो । नेपालीहरु लोडसेडिङ तालिकामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता थियो । कतिबेला बत्ति आउँछ, कुनबेला जान्छ, हरेक नेपालीहरुले दैनिक रुपमा कण्ठ पार्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
तर, प्राधिकरणमा कुलमानको प्रवेश नेपालीहरुको लागि उज्यालो बन्यो । अर्थात्, अध्याँरो युगले उज्यालोतर्फ पाइला चाल्यो, जसको कमाण्डर थिए, कुलमान । प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारीमा कुलमानले नियुक्ति पाएको दोस्रो महिनामै उज्यालोको पाइला देखिन थाल्यो ।
कुलमान ०७३ सालका भदौमा प्राधिरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति भए । कार्तिक महिनाको तिहारमा उनले काठमाडौंलाई पूर्ण रुपमा झलमल्ल बनाइदिए । जबकी कुलमानको पालाभन्दा अगाडि लक्ष्मीपूजाको दिनभन्दा अरुबेला तिहार पर्वमा समेत लोडसेडिङमा बस्थे नेपाली । तिहारलाई पूर्ण रुपमा उज्यालो बनाएका कुलमानले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौंलाई अघोषित रुपमा लोडसेडिङमुक्त बनाए ।
विस्तारै कुलमानले सिंगो मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर देखाइदिए । यो चानचुने कुरा थिएन । कुलमानको यो योगदानपछि उनी नेपालीजनको मनमा बसेका छन् ।
कुलमान यस्तो पात्र हुन्, जसले मैनबत्ति खोजेर हिड्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता अन्त्य गरिदिए, लोडसेडिङ तालिका हेरेर बस्नुपर्ने नेपालीहरुको दैनिकी बदलिदिए, कैयन्का व्यापार चम्काइदिए । झलमल्ल नेपाल बनाइदिए ।
त्यति मात्रै होइन, कुलमान समृद्ध नेपाल निर्माणका एउटा इँटा पनि हुन् । उनको कार्यकाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि स्वार्ण बन्यो । पहिलो वर्षमै देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएका कुलमानले दोस्रो बर्षदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगे । प्राधिकरण अहिले ११ अर्बभन्दा बढी नाफामा छ ।
हो, कुलमान तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पहिलोपटक बोनस समेत बाँड्ने काम गरे । यतिमत्रै कहाँ हो र कुशल व्यवस्थापकका रुपमा सबैलाई चकित पार्दै विद्युत अन्य मुलुकलाई बेच्ने सम्मका योजना उनले अगाडि बढाए । यस अवधिमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन विद्युत खर्च घटाउन राजश्व बढाउन प्रसारण तथा बितरण एबम सबस्टेसन विस्तार गर्दै संस्थागत सुशासन सुधार गर्दै नाफा कमाउने क्षेत्रमा उनलाई ठूलो सफलता हात मिलेको उनी आँफै बाताउँछन् ।
वास्तबमै कुलमान यो देशको शीर उचो राख्ने सुपुत्र हुन् । उनैको अठोट र प्रयास स्वरूप नेपालीले उज्यालोमा बस्न पाएका छन् ।
कुलमानको फेरि नियुक्ति हुन्छ हुँदैन ? यो चासो र चिन्ताको विषय छँदैछ । तर, आज म यति भन्न चाहन्छु, देशको शीर उचो बनाउने कुलमान बिदाई भए पनि करोडौँ नेपालीमाझ नेत्र ज्योति झैँ चम्किरहनेछ । अनि, कुलमानको योगदान सम्झेर युगौँ–युगसम्म हामी सारा नेपाली भन्नेछौँ, ‘कुलमान तिमी महान् छौँ’